‘अवैध धन्दा’ चलाउने विदेशीको ‘दादागिरी’, स्थानीयलाई धम्की ! – Tandav News
‘अवैध धन्दा’ चलाउने विदेशीको ‘दादागिरी’, स्थानीयलाई धम्की !
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ फाल्गुन ८ गते बिहीबार १९:३४ मा प्रकाशित
लेकसाइडमा ‘अवैध धन्दा’ गरिरहेको हार्ट एण्ड टियर्सका संचालकहरुले स्थानीय व्यवसायीलाई धम्की दिएका छन् । हार्ट एण्ड टियर्सको ‘अवैध धन्दा’बारे ताण्डव न्यूजमा समाचार प्रकाशन भएपछि प्रशासनले बन्द गराईदिएको थियो । सोही विषयलाई लिएर धम्की आएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका हुन् ।
प्रकाशित समाचारको स्रोत स्थानीय रहेको आशंकासहित हार्ट एण्ड टियर्सका संचालकहरुले धम्की दिएको एक व्यवसायीले बताए । ‘हामीले जानकारी दिएर समाचार आएको भन्दै हामीलाई उनिहरुले धम्की दिएका छन् । दादागिरी शैलीमा हामीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ’ नाम नबताउने सर्तमा एक व्यवसायीले ताण्डव न्यूजलाई सुनाए ।
स्थानीय व्यवसायीले हार्ट एण्ड टियर्सका संचालकले व्यवसायमै खलल पुग्ने गरि धम्की र अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आज (बुधबार) निवेदन समेत दिएका छन् ।
‘मिति २०७६ ११ ०७ गते साँझ ९ बजेतिर पोखरा ५ स्थित रहेको हट एण्ड टियर प्रालिको संस्थापक म्याट र जो र उसको समूह ४÷५ जना भएर माधक पदार्थ सेवन गरि हामीलाई एक्लो र निरिह सम्झी हाम्रा कर्मचारी र ग्राहकहरुको अगाडि नै बुलेट मोटरसाइकलमा आई व्यवसायमा धक्का पुग्ने गरी हामीलाई अपशब्द र धम्की दिई गएका छन् । सोही दिन दिउँसो अनुगमन टोली आएर हाट एण्ड टियर टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रालिलाई ताला लागाइदिएको थियो ।’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
उनिहरुले प्रशासन समक्ष सुरक्षाको माग समेत गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ‘उक्त घटनाको सूचना हामीले दिएको आशंका गरी बेलुका आएर अपशब्द बोल्दै धम्की दिएका छन् । हाम्रो जिउ धनको सुरक्षा तथा व्यापार गर्न पाउने हक सुनिश्चित चाहान्छौँ ।’
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले उक्त व्यवसायीहरुको शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेश दिएको छ । जिल्ला प्रशासनले चलानी नं ६५७३मा पत्र काट्दै कास्की प्रहरीलाई आज (फागुन ८ गते) आदेश दिएको हो ।
विदेशीको अवैध धन्दा मा प्रशासनको ताला
लेकसाइडको त्यो गल्ली, जहाँ चल्छ विदेशीको ‘अवैध धन्दा’
युवा पत्रकार रञ्जन अधिकारीलाई ‘मित्र मिलन पत्रकारिता सम्मान २०७६’
आज रातिदेखि झापाको दमकमा एक हप्ता लकडाउन
जेठ ३१ देखि पोखरामा जेसीज सप्ताह
नक्कली बीउ पीडित चितवनका किसानलाई २० प्रतिशत मात्र राहत
एकैदिन २६ संक्रमितको मृत्यु, थपिए ५ हजार ७४३ संक्रमित
कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ देखि १६ गतेसम्म
पोखरामा थपिए १९ संक्रमित
राष्ट्रपतिद्धारा रानीपोखरी उद्घाटन :उपत्यकाको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने भनाई
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा दुई महिनाको पारिश्रमिक कोरोना उपचार कोषलाई प्रदान